Golaha Ammaanka oo ka walaacsan go’aankii Trump ee Qudus – Radio Muqdisho
Qaraar qabyo ah ayaa loo gudbiyay xubnaha golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay kaasi oo ku saabsan magaalada Qudus.
Qaraarkan qabyada ah ayaa dhigaya in Sal iyo Raad aysan sharciga ku lahayn in hal dhinac uu go’aan ka gaaro mustaqbalka magaalada Qudus.
Tillaabooyiinkan oo ay soo jeedisay Dowladda Masar ayaa ku soo beegmaya ka dib markii uu madaxwayne Trump ku dhawaaqay in Mareykanka ay Qudus u aqoonsadeen caasimada Israa’iil.
Qaraarkan qabyada ah ee loo gudbiyay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqaya dhammaan dalalka kale in ay ka dheeraadaan in ay safaaradahooda ka samaystaan magaalada Qudus.
Dublamaasiyiinta ayaa sheegaya in qaraarkani uu haysto taageerada inta badan xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Balse waxaa laga cabsi qabaa in xukumadda Washington ay adeegsadto codka diidmada qayaxan ee Veto.
Go,aankii Dhawaan uu ku dhawaaqay Madaxweyne Trump ayaa soo wada jiitay dhawaan indhaha Caalamka gaar ahaan Dowladaha Islaamka waxaana Xusid mudan in Magaalada Istanbuul ee Dalka Turkiga uu ka dhacay Shirweyne ay yeesheen Dowladaha Islaamka loogana hadla Arrimaha Magaalada Barakaysan ee Qudus iyo Go,aankiii Trump.